IBill Bill kunye neNapoleon Dynamite | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 23, 2006 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 16, 2016 Douglas Karr
Kumnandi ukubona ukuba iMicrosoft inoburharha!
tags: ngamasango amatyalaI-napoleon dynamite
My Freakonomics - Gcina uHlahlo-lwabiwo mali lwakho ngemivuzo engcono
Jul 23, 2006 ngo-11: 33 PM
Ha ha, yayiyividiyo ehlekisayo leyo! Ndakhe ndeva ukuba iiGates zenze i-spoof yeNapoleon Dynamite, kodwa andikaze ndiyibone (ngaphandle kwesitayile) ngaphambi kwanamhlanje. Wenze izinto ezininzi ezinje ngale minyaka, ngenxa yoko unesihlekiso!
Jul 25, 2006 ngo-3: 12 AM
Yayifakwe phi loo nto? Ndonwabile ukubona uBill Gates enoburharha kuye.